Nepse Online उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप कडा, नयाँ नियममा के गर्न पाइने के नपाइने ? – nepseonline
Thursday 05-26, 2022, 10:56 pm
उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप कडा, नयाँ नियममा के गर्न पाइने के नपाइने ?
काठमाडौं । उपत्यकामा निषेधाज्ञालाई थप कडा हुने भएको छ। उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीको मंगलबार बसेको बैठकले आगामी वैशाख २९ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो। यो सँगै काठमाडौंमा अब निषेधाज्ञालाई थप कडाई गरिने भएको छ ।
नयाँ नियमअनुसार उपभोग्य वस्तुको पसल सञ्चालन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा थप कडाइ गरेको हो । अब अत्यावश्यक काम बाहेकमा घरबाहिर निस्कन पाइने छैन । दुई जना व्यक्तिबीच कम्तीमा २ मिटरको भौतिक दूरी हुनु आवश्यक छ भने अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने छ । सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । अत्यावश्यकबाहेकका सवारी साधन काठमाडौं प्रवेशमा रोक लगाइनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सवारी साधन सञ्चालनको हकमा सीमित सवारी पास जारी गरी सोको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिनुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट विदेश जाने यात्रुको हकमा हवाई टिकट, पासपोर्ट, भिसा हुनेहरुलाई सिधै एयरपोर्ट जाने सवारी साधनको हकमा सहजीकरण गरिनेछ ।
विकास निर्माणका सम्बन्धमा सम्बन्धित आयोजाहरुले नै आवासीय कामदार राखी अनिवार्यरुपले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी कार्य सञ्चालन गर्ने गराउने तथा निर्माण सामग्री ढुवानी राति १० बजेदेखि विहान ४ बजेसम्म मात्रै आवतजावत गराउनुपर्ने छ । निलो प्लेटका सवारी साधनको हकमा परिचय बाहक पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सवारी पास आवश्यक पर्ने छैन ।
उपत्यका बाहिर जानका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले अनिवार्यरुपले १० दिन क्वारेन्टिन राख्ने प्रतिबद्धता सहितको सिफारिसका आधारमा गन्तव्यस्थलमा जान पाइने छ ।